Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun at the 56th Plenary Meeting of 76th UNGA under Agenda Item 112
Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar at the 56th Plenary Meeting of the 76th United Nations General Assembly under Agenda Item 112: “Report of the Secretary-General on the work of the Organization” on 24 January 2022
(၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ (၅၆) ကြိမ်မြောက်
မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး၌ စစ်တပ်၏ လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှု တို့၏ သားကောင်များမဖြစ်စေရေး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းအနေဖြင့် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် မြန်မာပြည်သူများကို ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့
(နယူးယောက်မြို့၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်)
၁။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် ၂၄-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော (၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ (၅၆) ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး၌ “ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အစီရင်ခံစာ” ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂။ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း၏ မိန့်ခွန်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အဓိကအချက်များ ပါဝင်ပါသည်-
(က) ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အစီရင်ခံစာနှင့် ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားသွားသည့် ခိုင်မာသော ကတိကဝတ်ပြုမှုနှင့် ဦးစားပေးမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ ကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်မှုအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊
(ခ) ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါမှအစပြု၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး စသည်ဖြင့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် စိန်ခေါ်မှုများ ပြည့်နှက် လျက်ရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ လက်ရှိ ရှိနေသည့် နိုင်ငံတကာလမ်းကြောင်းများ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ မျက်နှာစာ ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာလာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် ပဓာနကျကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၏ ခိုင်မာသော ရပ်တည်ချက်များ၊ အားလုံးတူညီသော တိကျပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဖြင့်သာ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများကို အောင်မြင်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ Common Agenda ကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်မှုက ယင်းစိန်ခေါ်မှု များအား အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် အလွန်အရေးပါကြောင်း၊
(ဂ) ထို့ပြင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး အထူးလိုအပ်လျက်ရှိသော မတည်ငြိမ်သည့်နိုင်ငံများ အများ အပြားရှိနေသည့်အချက်ကို အတွင်းရေးမှူးမှ မှန်ကန်စွာ ထောက်ပြထားကြောင်း၊ ယင်းနိုင်ငံများအထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း တစ်နိုင်ငံအဖြစ် ပါဝင်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံနေဖြင့် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
(ဃ) လက်ရှိအခြေအနေတွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ် တင်းတင်းပင် ပြည့်မြောက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူ (၁၄၄၇) ဦး ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြား ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူများမှာလည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရကြောင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခံရကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် မြန်မာ့စစ်တပ်အား ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် ကြိမ်ဖန်များစွာ တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပြည်သူများ အပေါ် မည်သို့မျှ စဉ်းစားပေးခြင်းမရှိဘဲ၊ ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုဆန့်ကျင်ကာ လူ့အခွင့်အရေးကို ဆိုးရွားစွာ ချိုးဖောက်၍ ပြစ်မှုမြောက်များစွာကိုသာ ကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်း၊
(င) မြန်မာ့စစ်တပ်၏ အင်အားအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုနှင့် လူသားမဆန်သော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် မှုတို့ကြောင့် ပြည်သူများနှင့် ပြည်သူများ၏ အိုးအိမ်များ၊ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ၊ ကျန်းမာရေး အဆောက်အဦများ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် လယ်ယာပျိုးခင်းများ ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုမျှမကဘဲ အသက်သေးဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအပြင်၊ ရာနှင့်ချီသော ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း နီးစပ်ရာ နယ်မြေဒေသများသို့ ထွက်ပြေးရှောင်တိမ်းနေရပြီး ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ရပ်တည်နေရကြောင်း၊ ထိုသို့ ဒုက္ခ အကျပ်အတည်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသူများတွင် မသန်စွမ်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းမရွယ်လေးများနှင့် ကလေးငယ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ခက်ခဲသည့်အခြေအနေများနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီ မလုံလောက်မှုတို့က ၎င်းတို့အား ပိုမိုထိခိုက်လွယ်၍ စိုးရိမ်ရ သော အန္တရာယ်များသို့ရောက်စေရန် တွန်းပို့နေကြောင်း၊ မြန်မာစစ်တပ်မှ ဖော်ပြပါ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဥပဒေများကို ချိုး‌ဖောက်နေသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ် ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုတို့ကို ကျူးလွန်နေသည်မှာ သိသာ ထင်ရှားကြောင်း၊
(စ) သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာ့စစ်တပ်မှ ပိုမိုဆိုးရွားသော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ ကျူးလွန်မည့် ရန်စွယ် အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ၏ အကူအညီနှင့် အကာအကွယ်ပေးမှုတို့ကို လိုအပ်နေသည်မှာ ရှင်းလင်းမြင်သာပါကြောင်း၊
(ဆ) ဤသို့အားဖြင့် မြန်မာ့စစ်တပ်၏ ပြစ်မှုများကျူးလွန်မှုကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများ ပိုမိုမတိုးပွား လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအပေါ် စစ်တပ်မှ ကျူးလွန်နေသည့် လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ် ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုအန္တရာယ်တို့မှ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဏ်စာတမ်းနှင့်အညီ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂမှတစ်ဆင့် ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းစုံကို အသုံးပြု၍ အချိန်မီပြတ်သားစွာ ကာကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊
(ဇ) အဓိကအားဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကတိကဝတ်ပြုမှုနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၏ ခိုင်မာပြီး မမှိတ်မသုန် ထောက်ခံမှုတို့ဖြင့် မြန်မာ့စစ်တပ်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို အပြီးတိုင်အဆုံးသတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးတို့ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ကာ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီများကိုလည်း ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာယာဝပြောမှု ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာစေရေးတို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ထိရောက် မြန်ဆန်၍ ညီညွတ်သည့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးကြရန် မိမိအနေဖြင့် ထပ်လောင်း တောင်းဆိုလိုပါကြောင်း။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်
Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar at the 56th Plenary Meeting of the 76th United Nations General Assembly under Agenda Item 112: “Report of the Secretary-General on the work of the Organization”
(New York, 24 January 2022)
At the outset, I wish to thank the Secretary-General for his report and firm commitment as well as priorities expressed in his statement on the work of the UN. I would also like to commend him for his able leadership on the work of the UN.
Our delegation associates itself with the statement delivered by the Permanent Representative of Cambodia on behalf of ASEAN.
I wish to add following points on my national capacity.
Our world is full of challenges from COVID - 19 to climate change, development, rule of law, peace and security and the list will go on. It is paramount to further strengthen existing international platforms especially this UN platform. The firm commitment and decisive action with one voice of all member states of the UN are imperative to tackle all challenges before us successfully. In this regard, effectively implementing the Secretary-General’s common agenda is vital for the success.
Myanmar wishes to express our deep appreciation to the Secretary-General for his pledge for sparing no efforts to mobilize the international community and stepping up the push for the peace. The Secretary-General rightly pointed out that there are many hotspots in this small world. Myanmar is one of them. We look forward to working closely with the Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar.
Almostayear has approached since the military coup; more than 1,447 people have been killed by the military, with thousands arrested, detained and tortured. Despite repeated calls by the international community including the United Nations, the military remains inhumane and is inconsiderate for all people in Myanmar, still ignoring the will of the people, and rather violating the human rights of the people and committing serious crimes.
Due to the military’s excessive use of force and indiscriminate attacks on people as well as their inhumane and brutal acts, many houses, religious facilities, healthcare facilities, schools and farmland have been destroyed, and accordingly hundreds of thousands of people have to leave the respective places and became displaced people in addition to number of people death and injured. The displaced people and victims include people from vulnerable groups such as people with disability, elderly people, women, girls and children. Difficult situations and lack of sufficient humanitarian assistance push them more vulnerable and higher risk. The grave violation of human rights and humanitarian law committed by the military is clearly amounting to crimes against humanity and war crimes.
It is very clear that the people of Myanmar need help and protection from the international community to prevent further atrocities from the Myanmar military. Please do not let more people become victims of crimes against humanity and war crimes of the Myanmar military. Therefore, we are of the view that the international community, through the United Nations, has the responsibility to use all possible means in accordance with the UN Charter to help protect all Myanmar people from crimes against humanity and war crimes by taking collective action inatimely and decisive manner.
In conclusion, Mr. President, with the pledge and firm commitment of the Secretary-General as well as the strong and unwavering support of the member states of the UN, we can immediately end the military’s brutality and we can bring peace and stability and provide humanitarian assistance to those in need in Myanmar. Therefore, I appeal again the member states for an urgent unified response to help put Myanmar back on the path to democracy and prevalence of peace and prosperity.